Ulefone Gemini Pro dia hifanaraka amin'ny Google Assistant | Androidsis
Ulefone Gemini Pro dia hifanaraka amin'ny Google Assistant
Ulefone manohy mamoaka vaovao tena mahaliana momba ny sainam-pirenena manaraka. Teo aloha dia nahita antsipiriany vitsivitsy momba ny Ulefone Gemini y Gemini Pro, tsipika vaovao misy terminal avo lenta izay ho avy miaraka amin'ny famaranana sy ny endri-javatra amin'ny haavon'ny elanelam-potoana avo lenta amin'ny vidiny mirary tokoa.
Ankehitriny, ny mpanamboatra azy dia manana manao dokam-barotra amin'ny alàlan'ny tranonkalanao de na ny Ulefone Gemini Pro na ireto finday manaraka ireto izay tonga eny an-tsena dia hifanaraka amin'ny Google Assistant, ilay mpanampy manokana matanjaka izay napetraka amin'ny telefaona sasany misy Android 6.0 Marshmallow na avo kokoa.
1 Ho hita amin'ny fitaovana Ulefone i Google Assistant
Ho hita amin'ny fitaovana Ulefone i Google Assistant
Taorian'ny fisehoan'ny SIRI sy Cortana dia fantatray fa na ho ela na ho haingana dia handefa vahaolana manokana i Google. Ary ny zava-misy fa ny Ulefone Gemini Pro sy ny sisa amin'ny terminal an'ny mpanamboatra dia hifanaraka dia vaovao be.
Nanambara izany i Ulefone ny Ulefone Gemini Pro dia hamely mivantana ny tsena miaraka amin'i Google Assistant, satria ny serivisy dia hampidirina ao anaty rafitra. Noho izany dia nanova ny kerneln'ny fitaovany izy ireo hahafahan'izy ireo mampiasa ny serivisin'ny mpanampy manokana an'i Google.
Indrisy Ny mpanampy Google dia mbola tsy misy amin'ny Espaniôla, fa ny fahitana ny tahan'ny fanavaozana, heveriko fa tsy haharitra ela ny famoahana kinova vaovao izay mifanaraka amin'ny Espaniola.
Tadidio izany Google Assistant dia faharanitan-tsaina mahery vaika izay hanangona angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fampiasana anay handefasana soso-kevitra momba ny toerana, valiny amin'ny fanontanianay, vinavinan'ny toetr'andro, famakiana hafatra ...
Mila milaza aho fa ny zava-misy izay alehan'i Ulefone ovao ny kerneln'ireo fitaovanao hahafahan'izy ireo mampiasa serivisy Google Assistant Hetsika tena mahira-tsaina ataon'ny orinasa izay, amin'io fomba io, mahavita manavaka ny tenany amin'ireo mpifaninana mivantana aminy.
Miaraka amin'ny zavatra tsotra toy ny fanaovana finday Ulefone hifanaraka amin'ny Google Assistant raha misalasala ianao amin'ny fividianana modely avy amin'ny DOOGEE, Leagoo ary marika aziatika hafa na iray amin'ireo vahaolana Ulefone, dia azo zahana ny fandanjana ho anao. Diniho bebe kokoa tsara toy inona ny endrik'i Ulefone Gemini Pro ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ulefone » Ulefone Gemini Pro dia hifanaraka amin'ny Google Assistant
Sony Xperia XA1, fiheverana voalohany ao amin'ny MWC